Mandra-pahoviana ny batterie iPhone 7 sy 7 plus? | Avy amin'ny mac aho
Ny fahitana fa ny lohahevitra anio dia ny batterie, ny familiana tsingerina ary ny Apple Watch, nanapa-kevitra ny hamarana ny andro aho amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antsipiriany momba ny iPhone 7 sy ny kinova goavambe. Efa herinandro vitsivitsy miala ny teny fototra isika, na dia mbola tsy misy fantatra momba ny daty marina aza. Afaka nanolotra anay zavatra maro izy ireo na nandiso fanantenana anay, toy ny tamin'ny volana martsa. Saingy tsy isalasalana, ny iray amin'ireo tanjaky ny fitaovana faneva dia ny bateria.
Hafiriana no haharetan'ny iPhone 7 tsy andoavantsika azy? Izany no antenaina raha jerena ireo tsaho sy vaovao hitantsika tato ho ato.
1 Ny iPhone 7 dia hirehareha amin'ny bateria
2 Isan'andro miaraka amin'ny iPhone maharitra kokoa
Ny iPhone 7 dia hirehareha amin'ny bateria
Mety tsy ny zava-baovao indrindra raha tsy manova ny fomba fiasan'ny bokotra Home na ny fahitana azy, fa amin'ny batterie vitsy dia vitsy no afaka mandresy azy. Androany isika dia niresaka betsaka momba ny bateria heverina fa tafaporitsaka avy amin'ny Apple Watch 2. Eny, hanana 35% mihoatra ny fahaizany izany. Toy izany koa no nolazaina momba ny iPhone, na dia somary ambany aza ny isan-jato. Ny iPhone 7 dia voalaza fa tonga miaraka amin'ny bateria 15% bebe kokoa ara-batana, izay tsy kely. Andao hojerentsika etsy ambany hoe firy ny ora fanampiny hampiasana azy, ary inona no handikany azy rehefa mampiasa azy io amin'ny fiainantsika isan'andro.
Satria manana ny maodely 4,7-inch an'ny iPhone 6 aho ary ity no manome ny olana betsaka indrindra mandritra ny faharetany, dia hataoko ohatra izany. Etsy ankilany, maharitra kokoa ny plus. Izay no antony itiavako mifantoka amin'ny firesahana ilay kely. Amin'izao fotoana izao Apple dia mampanantena maharitra hatramin'ny 10 ora. Niaina teo anelanelan'ny 7 sy 8 aho tamin'ny fampiasana mahazatra. Eny amin'ity Manampy 15% izahay, afaka mahita faharetan'ny 8 sy 9 ora izahay na 10 aza, fa tsy amin'ny batterie vatana ihany no iainana ny iPhone.
Tokony ho raisina fa ny fanatsarana ny rafitra fiasa, ny maody fitehirizana bateria ary ny processeur dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fotoana haharetan'ny iPhone mavitrika nefa tsy mandeha amin'ny plug. Miaraka amin'ireo fanatsarana hitantsika ao amin'ny iOS 10 sy ny iPhone 7 dia mora tratra 10 ora fampiasana tsy tapaka, ary hanandrana hahatratra ny 11. Izay mifandraika amin'ny maodely 4-inch. Mikasika ny maodely miampy 7, fampiasana maharitra 15 ora dia azo tratrarina.
Isan'andro miaraka amin'ny iPhone maharitra kokoa
Tsy ny fanoherana ny rano sy ny fikororohana ihany fa haharitra amin'ny bateria ihany koa. Raha nanampy fiampangana haingana kokoa ary mety ho charger tsy misy tariby i Apple, ny fahasamihafana amin'ny iPhone 6s ka hatramin'ny 7 dia ho lozabe. Azonay atao ny manome vola ny plus isaky ny roa andro, ary haharitra mandritra ny andro ilay kely amin'ny fampiasana azy io tsy an-kijanona.
Nilaza izy ireo fa ity taranaka ity dia tsy hanaitaitra antsika na hahagaga antsika amin'ny fanovana lehibe amin'ny endrika, fa tena hanova ny tarika aoriana izy ireo ary mety hampiditra loko vaovao. Tsy mila zavatra bebe kokoa isika izao, afaka maharitra herintaona miaraka amin'ny endrika madio sy tsara ankehitriny. Amin'izao fotoana izao ny laharam-pahamehana dia ny manatsara ny bateria sy ny masontsivana, hahatonga ny iPhone 7 ho fitaovana mety indrindra.
Matoky tanteraka an'ity terminal ity aho ary mieritreritra aho ho afaka mihoatra ny varotra azon'ny iPhone 6s ary 6s plus. Raha taranaka teo aloha ny taloha dia vao mainka ho bebe kokoa amin'ity taona ity. Avelao hangovitra i Samsung, satria na dia tsy afaka sitrana na hahazo fizarana tsena marobe aza ireo paoma manaikitra dia ho sitrana ny lazany tsara ary ho gaga anay araka ny tokony ho izy amin'ny iPhone 7 sy 7 miampy fatratra lavitra noho izay rehetra hitantsika teo aloha.
Izany dia nampiana fitaovana tsy mampino toa ny Apple Watch 2, izay nahitantsika vaovao sy tsaho mahaliana maro. Ny zava-drehetra dia manondro fa amin'ity taona ity Apple dia tsy hanavao endrika amin'ny famolavolana ihany koa, fa hanatsara ny batterie-n'ny zava-drehetra, izay no notadiavin'ny mpampiasa indrindra tamin'ny orinasa niaraka tamin'ny paoma manaikitra. Izy io dia ho keynote lehibe misy vokatra tena tsara, manantena izahay fa tsy ho ela loatra noho ny olan'ny famokarana. Andao hojerentsika raha milaza zavatra izy ireo amin'ity herinandro ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Mandra-pahoviana ny batterie iPhone 7 sy 7 plus?
Daniel Santiago Munoz Moreno dia hoy izy:
ny diso fa ny faharetana dia 10 ora, satria maharitra adiny 5 fotsiny aho no nilalao lalao maivana.
Valiny tamin'i Daniel Santiago Muñoz Moreno
Manana ny iphone 7 aho ary maharitra eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 5 ora amin'ny fampiasana mahazatra.